Than Soe Hlaing – Bon Bawa 2, Rights and Wrongs | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Cartoon Saw Ngo – What’s up Human Right?
many diplomats seek asylum in US‎ within 20 years →
Than Soe Hlaing – Bon Bawa 2, Rights and Wrongs
သခင်တင်မြ ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် ဒုတိယပိုင်း အမှားနှင့်အမှန်
သန်းစိုးလှိုင်၊ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၁
ဘုံဘ၀မှာဖြင့် နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံမှတ်တမ်း စာအုပ်ဖြင့် မြန်မာစာပေလောက၊ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူများ အကြားလူသိများခဲ့သည့် သခင်တင်မြက သူ၏ နိုင်ငံရေး ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်နှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုခေတ် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ ကိုးကားပြီး အမှားနှင့် အမှန် ဟု ယခုနောက်ဆုံးထပ်မံ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် သင်္ကြန်ပြီး ဧပြီလကုန်တွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သခင်တင်မြ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် စာအုပ်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီကာလနဲ့ စစ်အတွင်း၊ စစ်ပြီးကာလ မြန်မာနိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ဖတ်ရှုဖူးပြီး အဆိုပါခေတ်ကာလက နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံ၊ နေထိုင်ပုံ ၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအပေါ် သက်စွန့်ဆံဖျားကြိုးပမ်းကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့တကွ နိုင်ငံရေး အဖြစ်အပျက်တွေကို စွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ ဖတ်ရှုခဲ့ကြရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ခေတ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေ များပြားပေမယ့် ထိုခေတ်ကာလအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်လည်ရေးသားဖို့ အခွင့်အလမ်းမရကြတဲ့အဖြစ် မျိုးတွေ့မြင်ရပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့သူ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်မှာ နိုင်ငံရေး အယူဝါဒ၊ အုပ်စုကွဲပြားပြီး တောထဲရောက်သူ၊ ကျဆုံးသူ၊ ထောင်ကျသူ စသဖြင့် အနိမ့်အမြင့်များလွန်းတဲ့ ဘ၀တွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံစာအုပ်များ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အရေအတွက်နှင့်စာလျင် နည်းပါးလှပါတယ်။ လက်ဝဲ၀ါဒ ယုံကြည်သူ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အထုပ္ပတ္တိတပိုင်း၊ နိုင်ငံရေးဘ၀ တပိုင်းစာအုပ်တွေ ရေးသားပြီးစီးပေမယ့် စိစစ်ရေးက ခွင့်မပြုတာကြောင့် အများပြည်သူဖတ်ရှုခွင့်ရတဲ့ အဆင့်ရောက်မလာတာမျိုးလည်း ကြားသိရဖူးပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် သခင်စိုး ကိုယ်တိုင်အကျဉ်းကျခံနေရစဉ် ရေးသားတဲ့ အထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကျော်ကတည်းက စာပေစိစစ်ရေး တင်ပြထားပေမယ့် သူကွယ်လွန်သွားချိန်ထိ ထုတ်ဝေခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ သခင်စိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သခင်တင်မြ စာအုပ်တွေမှာ အတော်များများ ဖေါ်ပြပါရှိခဲ့ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ရေးသားတဲ့ စာအုပ်မှာ ပါလီမန်ခေတ်နဲ့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကျော် တောတွင်း လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်နေတဲ့ကာလတွေ အထိရေးသားခဲ့တယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေအဖို့ လေ့လာ သင်ခန်းစာယူစရာ အဖိုးတန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်မှာ မလွဲပါဘူး။
ဦးစောရဲ့ လုပ်ကြံခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာလည်း အဖိုးမဖြတ်နိုင်သလို သူတို့ကိုယ်တိုင် အသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ရင် မေးမြန်းရေးသားကြလျင် သော်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင် ရေးသားဖြစ်ရင်သော်လည်းကောင်း သမိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မှတ်တမ်းတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
သခင်ဖေဌေးရဲ့ သခင်ဖေဌေး၊ သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စစ်အတွင်း ခရီးသည် ၊ ဦးနုရဲ့ ငါးနှစ်ရာသီ ဗမာပြည်၊ ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်းရဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ ဒဂုန်တာရာရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ စတဲ့စာအုပ်တွေမှာ ထိုခေတ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ အငွေ့အသက် ခြေရာတွေကို နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်တွေ နောက်မျိုးဆက်တွေ မက်မက်မောမော ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာကြတာ တွေ့မြင်ကြားသိနေရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာ သတိပြုစရာ တချက်ကတော့ ယခုစာအုပ်လို သခင်တင်မြရဲ့ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် စာအုပ်လို သမိုင်း အဖြစ်အပျက်ကိုယ်တွေ့ ရေးသားတဲ့ စာပေတွေဟာ သမိုင်းမဟုတ်သေးဖူး ဆိုတာပါပဲ။ သမိုင်းရေးသားဖို့ အထောက်အထားတွေ၊ အချက်အလက်တွေသာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ သမိုင်းဆိုတာကို သမိုင်းပညာရှင်တွေက သုတေသနပြု ဖေါ်ထုတ်ရေးသားကြရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက သမိုင်းကော်မရှင်၊ သမိုင်းစာအုပ် ပြဌါန်းရေး ကော်မီတီတွေဟာ အာဏာရှင်စနစ်ခေတ် ၂ ခေတ်အောက်မှာနေကြရလို့ လွတ်လပ်စွာရေးသား ပြုစုခွင့်မရကြပါဘူး။
သခင်တင်မြရဲ့ ဘုံဘ၀မှာဖြင့်စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိပျဉ်းမနားမြို့မှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မီတီဝင်ဟောင်း တဦးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ဒီစာအုပ်ထဲမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေလွဲမှားနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖူးပါတယ်။
ထို့အတူပဲ သခင်တင်မြ ဒုတိယမြောက် ဘုံဘ၀မှာဖြင့် ထပ်ကြပ်မကွာ စာအုပ်မှာလည်း ပျဉ်းမနား သခင်ဘနီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားဖေါ်ပြချက်ထဲမှာ အချို့အချက်အလက်တွေလွဲမှားနေတယ်လို့ သခင်ဘနီရဲ့ သားဖြစ်သူက ထောက်ပြဖူးပါတယ်။
ဘုံဘ၀မှာဖြင့်၊ ထပ်ကြပ်မကွာ စာအုပ်တွေမှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကာလတွေကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ယခုထွက်ရှိတဲ့ စာအုပ် အမှားနဲ့ အမှန်မှာတော့ စာရေးသူ သခင်တင်မြက ၁၉၄၅ မှ ၁၉၄၈ ခုဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးရသည့်နေ့အထိ ၃နှစ် ၄ လနှင့် ၅ ရက်တာကာလကို ဖြစ်စဉ်အလိုက် စီစဉ်ပြီး ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ယခင်စာအုပ်နှစ်အုပ်လို ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံ အပေါ်မူတည်ပြီး ရေးသားတာတွေ့ရပြီး ယခုစာအုပ်က ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံထက် အခြားသူတွေရဲ့ သမိုင်းအဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွေကိုပါ ကိုးကားဖြည့်စွက်ပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ဥပမာ သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စစ်အတွင်း ခရီးသည် ၊ လူဝီအယ်လန်ရဲ့ စစ်တောင်း တိုက်ပွဲ၊ ရဲဘော်မြရဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ရဲခေါင်ပျောက်ကြား ၊ တက္ကသိုလ် နေ၀င်းရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စည်းရုံးရေး ကြိုးပမ်းမှု၊ မောင်မြဟန်ရဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း အဘိဓါန် စတဲ့စာအုပ်တွေကို ကိုးကားထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ယခုစာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၀ တွင် ဂျပန်ကို တိုက်ထုတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ပြန်အ၀င် ရန်ကုန်သိမ်းသည့် ကြေညာချက်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး နေ၀င်းနာမည်နှင့် ကြေညာချက်ရေဒီယိုမှ ကြေညာရာတွင် စစ်ဦးစီးချုပ် မဟုတ်ပဲ စစ်ဦးစီးချုပ်ဟု အမည်တပ်ကြေညာခဲ့သည့် ကိစ္စကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ထိုသို့ကြေညာခြင်းသည် တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ် ဟုပြောပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးနေ၀င်းကို တပ်ကထွက်ခိုင်းသည့် အဖြစ်ကို ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။ ထိုကြေညာချက်ကို ဗိုလ်မှူးကြီး နေ၀င်း မသိပဲ ဗိုလ်အောင်ကြီးက သူ့သဘောနှင့် သူကြေညာခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သခင်ဗဟိန်းကို ကာနယ် (ဗိုလ်မှူးကြီး ) ခန့်သည့်အမိန့်ထုတ်ပြီး နောက်တနေ့တွင် စစ်ရုံးလာ သတင်းပို့ရန်ပါ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် သခင်ဗဟိန်းမှာ ငှက်ဖျားမိနေပြီး အမိန့်စာကို အံ့အားသင့်ကာ သခင်သန်းထွန်းထံ အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သခင်သန်းထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်ထံ ချက်ခြင်း သွားတွေ့ပြီး သခင်ဗဟိန်းကို ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ မပေးနိုင်ကြောင်း ၊ နေလည်းမကောင်းသဖြင့် ပါတီမှ ခွင့်ပေးထားရသည့် အကြောင်း ပြောသည်လို့ ယခုစာအုပ်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
သခင်စိုးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း၊ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးမှ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထုတ်ပစ်ခံရခြင်း ကိစ္စရပ်များ အသေးစိတ်ကို သမိုင်းစာအုပ် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များနှင့် တွဲဖက်ပြီး ရေးသားထားသည်ကို ယခုစာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုစာအုပ်တွင် အချို့သောသမိုင်းအဖြစ်အပျက်များနှင့် အတူ ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် စာရေးသူအနေဖြင့် မည်သို့မှားခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း သုံးသပ်ဖေါ်ပြထားတာကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
စာရေးသူ သခင်တင်မြက ယခုစာအုပ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်ရေးသားပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မတ်လတွင် ပြီးစီးတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုးကတော့ ကျပ်ရှစ်ထောင်ဖြစ်တာကြောင့် စာပေချစ်သူတိုင်း လက်လှမ်းမှီတဲ့ ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။
ထုတ်ဝေသည့် ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၀၁၁
တန်ဖိုး ၈၀၀၀ ကျပ်၊ ပန်းရွှေပြည် စာအုပ်တိုက်
Posted by oothandar on July 5, 2011 in Book Shelf, Than Win Hlaing